Tranonkala inona ho an'ny portfolio, Behance na Dribbble? | Famoronana an-tserasera
Behance sy Dribbble nalamina toy ny ny tsara indrindra hanehoana ny portfolio-tserasera. Misy safidy hafa fa ireo tranonkala roa ireo dia mametraka ny tenany ho tranonkala tonga lafatra amin'izany, ary izany dia noho ny antony maro.
Ireo antony ireo dia noho ny habetsahan'ny mpampiasa sy ny fahaizany mampandeha ny portfolio misy antsika, na dia izany aza tsy ho asa mora izany, satria tsy mandray zavatra tsy misy dikany izy ireo na dia manana avo lenta amin'ny maha mpanakanto antsika aza izahay.
Ny fahasamihafana voalohany ananantsika dia ny amin'ny Dribbble dia mila fanasana izahay handefa ny portfolio misy ny safidy rehetra raha i Behance kosa dia mora toy ny fisoratana anarana. Na dia toa nikatona varavarana aza i Dribbble tamin'ny voalohany, dia azo noforonina ny mpampiasa iray hamorona portfolio, na dia eny aza, mila asaina hankafy tanteraka ny traikefa Dribbble isika. Amin'ity lafiny ity, Dribbble dia tsy hamela ny mpanakanto iray izay tsy manana kalitao handalo ny efijery.
Ny fahasamihafana bebe kokoa eo amin'izy roa dia hita ao Behance dia mikendry vondrona mpamorona isan-karazany manana fahasamihafana lehibe kokoa amin'ny lamaody ka hatramin'ny zavakanto an-tanàn-dehibe ka hatramin'ny famolavolana tranonkala. Dribbble kosa dia toy ny tambajotra sosialy ho an'ny mpamorona tranonkala, mpamorona sary, mpanao sary ary ireo karazana mpanakanto ireo.
Raha manontany tena isika hoe aiza no hahamora ny hahitan'izy ireo antsika, dia tokony efa fantatsika fa manana mpampiasa 1.5 tapitrisa i Behance raha toa ka tsy mahatratra ny ampahatelon'ny tarehimarika akory i Dribbble. Midika izany fa raha manana laza ambony ianao amin'ny maha-mpanakanto anao ho mora ho azy ireo ny mahita anao ao amin'ny Dribbble, ankoatry ny fisian'ity tranonkala ity dia mamela ny fijanonana ivelan'ny tranokala hihaona amin'ny tarehy izy ireo.
Eo amin'ny lafiny fanatanterahana asa avy amin'ireo tranonkala roa dia mitovy ny zavatra, nanomboka ny orinasa dia afaka mividy mombamomba anao isam-bolana manomboka amin'ny $ 350 amin'ny Dribbble ka hatramin'ny $ 395 amin'ny Behance hahitana mpanakanto misy mombamomba azy.
Raha ny momba ny kinova pro, Dribbble dia manana iray $ 20 isan-taona hiditra tsy misy fetra amin'ny tambajotran-tseraserany raha toa ka Behance, na dia manome portfolio maimaim-poana aza izy, tsy toy ny misy azy io ary mandritra ny 99 dolara isan-taona dia hanana ny anao manokana ianao. Na dia tsara aza, raha mpamorona sary ianao dia tokony hitady azy ireo hampiantrano anao manokana ary hanome fikitika tany am-boalohany.
Ho famaranana, raha manomboka ny dianao kanto amin'ny alàlan'ny tamba-jotra ianao, Dribbble no tranonkala voalohany, Manana an'i Behance rehefa efa manana anarana sy tamba-jotra ahafahanao mandeha amin'ny mpanakanto an'arivony sy an'arivony maro ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Iza amin'ireo tranonkala an-tserasera no tsara kokoa hanehoana ny portfolio, Behance na Dribbble?